Waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee TCDD iyo TCDD Transportation Inc., xaraashyo iyo natiijooyinka hindisada iyo sidoo kale khariidadaha tareenka iyo jadwallada!
Maalgelinta dheeraadka ah ee Ankara-Istanbul Iskuduwaha Xawaaraha Sare ee Mashruuca Heshiiska Deynta Heshiiska Diiwaangelinta
Republic of Turkey General Directorate of State Tareennada Maamulka Ankara-Istanbul High Speed ​​Tareen Project la fuliyay in ujeedooyin maalgelinta dheeraad December 13 2011 ee taariikhda European Investment Bank saxiixay la 400 million euros [More ...]
DLH si uu u sameeyo Shirinyer Tram
Ku dhawaad ​​13 kun oo 5 mitir oo dherer ah Şirinyer-Tınaztepe oo ka socota Agaasimaha Guud ee Tareenka, Harbor iyo Dhismaha Garoomada Diyaaradaha (DLH) oo oggolaanaya mashruuca 400 kiiloomitir Üçkuyular-Halkapınar oo ka socda xariiqyada tareenka ee ay qorsheysay İzmir Metropolitan Dowlada Hoose [More ...]
Adnan Ekinci: Mas'uuliyad darajo Heerka Heerka Qarsooni maaha mid ka hooseeya mas'uuliyadda TCDD
Adnan Ekinci, La-Taliyaha Wasaaradda Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, wuxuu cadeeyay in aysan aheyn mas'uuliyada TCDD in ay qaado qawaaniinta iyo talaabooyinka amaanka ee isgoysyada. [More ...]
Dawlada Dhexe ee Dumarka waxay samayn doontaa waddaninimo
Wadooyinka Tareenka ee Gobolka, qaar ka mid ah kuwa loo yaqaan 'immovvable' ayaa loo baahan yahay mashruucyo kala duwan oo lagu soo daro Barnaamijka Maalgashiga ee 2011 iyo waxyaabaha ku jira (qaab dhismeedka ama geed uu leeyahay qof aan ahayn milkiilaha dhulka) "deg deg" [More ...]
Ankara-Sivas oo ah mashruuc tareen oo xawaaraha sare ah oo lagu dhammeeyo 2016
Yozgat wuxuu sii wadi doonaa dardargelinta mashruuca tareenka xawaare sare leh, kaasoo yareyn doona Ankara-Sivas 3 saacadood. [More ...]
Cabbiraadyada isgoysyada heerarka hoose waxay yareeyaan shilalka
Thanks to tallaabooyinka la qaaday 10-kii sano ee la soo dhaafay, heerka shilalka goynta iyo tirada dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay shilalkaan si aad ah ayey hoos ugu dhacday. Hawshan, 78 boqolkiiba tirada shilalka isgoysyada ayaa ahaa [More ...]
TCDD ayaa daweeyey magaca YHT
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD), tareenka Xawaaraha Sare (YHT) magac brand. Markii la isticmaalay TCDD Machadka Patent-ka ee Turkiga, magaca loo yaqaan 'YHT' iyo isticmaalkiisa waxaa loo diiwaangeliyay astaan ​​ahaan. Nidaamka diiwaangelinta, Machadka [More ...]
Xarunta Haydarpasa way cusboonaysiisay, dib u dhisku wuxuu soconayaa laba sano
Xarunta tareenka ee Haydarpaşa, oo joojin doonta dhammaan tareennada iyo adeegyada tareennada sababta oo ah shaqooyinka tareenka xawaaraha ku socda ayaa la cusboonaysiinayaa. Wasaaradda Gaadiidka ayaa gebi ahaanba soo celin doonta saldhigga tareenka taariikhi ah. Laba sano oo shaqo ah kadib, gubasho iyo [More ...]
Tareenada Diyaarinta 2023
Himilada nidaamka gaadiidka dalkeenna waxaa lagu go'aamiyay Golaha Gaadiidka Caalamiga ah ee 10. Go’aamo aad muhiim u ah ayaa loo gaadhay wadada tareenka. Nidaamka gaadiidka waa la diyaariyey. Macnaha guud ee go'aamadaas; 2023 waa in loo sameeyo waaxda gaadiidka 350 [More ...]
Maxay yihiin horumarinta wax soo saarka cirifka iyo wagon?
Gawaarida gawaarida xamuulka iyo kuwa xamuulka ah ayaa laga sameeyay magaalada TÜLOMSAŞ ee Eskişehir, tareenka iyo rakaabka rakaabka ee magaalada TÜVASAŞ ee Sakarya iyo baabuur xamuul oo saaran TÜDEMSAŞ ee Sivas. 80 kumbuyuutar dulucda korantada si ay u buuxiso baahiyada TCDD [More ...]
Jaamacadaha iyo iskuulada Kocaeli iyo Sakarya waxay ka socdaan Istanbul si ay u noqdaan xaafadda!
Sababo la xiriira shaqada Tareenka Xawaaraha Sare, adeegga tareenka ee ka socda Haydarpaş illaa Anatolia waa la dhimay. Ardayda jaamacadaha ee Kocaeli iyo Sakarya ilaa Istanbul kana yimid dugsiga iyagoo ka jawaabaya go'aanka… Tareenka Xawaaraha Sare (YHT) [More ...]
Wareysiga Gaarka ah ee Agaasimaha Guud ee TCDD Süleyman Karaman: Tareenka xawaaraha sare wuxuu ahaa riyo
Maareeyaha Guud ee TCDD Süleyman Karaman wuxuu sheegayaa in TCDD, oo sanado badan la iska indha tiray, uu noqday mid firfircoon oo leh tikniyoolajiyad horumarsan. Karaman, oo ah midka ugu aaminka badan, tayada iyo habka dhaqaale ee gaadiidka ayaa waliba ah [More ...]
Sarikamış-Çıldır Wadada Wadada Tareenka
Sarosam, Davos oo ka tirsan Caucasus, waxaa laga qaaday dano iyo maalgashi. Qiyamkoodii waa la burburiyey, waa la daadiyay oo dhinac laga riixay. Mid ka mid joqoraafiyeyaasha ugu quruxda badan adduunka, nasiibdarro, waa la khasaaray ... Kars iyo Sarıkamış Universiad waxay wadaagaan ciyaarta [More ...]
Shaqooyinka dhismaha qalabka korontada ee TCDD
TCDD - Agaasinka guud ee taraafikada gobolka - ANKARA, Tekirdag-Muratli khadka ayaa goyn doona qandaraaska dhismaha warshad dhisme ayaa la qabtay. Goobaha korantada ee qadka Tekirdağ-Muratlı waxaa lagu jaray nidaam furan [More ...]
« 1 ... 371 372 373 ... 375 »